तराईमा कांग्रेस कमजोर छैन, नेतृत्वले टिकट दिँदा विवेक नपुर्याउदा हार ब्यहोर्नु पर्छः कोषाध्यक� | KTM Khabar
२०७४ कार्त्तिक १६ गते २३:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । देश निर्वाचनमा होमिएको छ । एकातर्फ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनले नयाँ तरङ्ग श्रृजना गरेको छ भने आफुलाई लोकतान्त्रिक सक्ति भन्ने नेपाली कांग्रेस पनि विभिन्न दलसंग सहकार्यमा चुनाबमा होमि रहेको छ । यसै पेरिफेरीमा तराईका विभिन्न समस्या तथा नेपालीकांग्रेसको अवस्थाका विषयमा नेपाली कांग्रेसमा चार दशक भन्दा बढी त्रियाशिल भइरहेका नेता एवं पुर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पुर्व–सप्तरी क्षेत्र नम्वर ४ का क्षेत्रीय सभापती, बर्तमान सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष शिव नारायण चौधरीसंग केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले विशेष सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
के मा ब्यस्त हुनुन्छ ?
अहिले हामीहरु टिकटको लागि ब्यस्त भएका छौँ । म सप्तरी क्षेत्र नम्वर ३ मा क्षेत्र तथा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाको लागी शिफारिस भएको छु । टिकट आफ्नो पक्षमा पार्नको आगि कसरत गर्दै छु । टिकट राम्रो मान्छेलाई पार्टी नेतृत्वले दियो भने हामी चुनाब जित्छौ । त्यसमा कुनै शंखा छैन ।
तराईमा तपाईको पार्टीको अबस्था कस्तो छ ?
एकदम राम्रो छ । पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुले टिकट दिने क्रममा रियालिटी बुझेर हाम्रो भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दियो भने कांग्रेस पार्टीको पोजिसन राम्रो छ । हाम्रो जिल्ला कांग्रेसको संस्थापक नेता भएको जिल्ला पनि हो । हाम्रो पोजिसन राम्रो छ ।
तपाईको पार्टीका केन्द्रिय नेताहरुले राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई च्याप्ने प्रवृति भएको कारण पनि चुनावमा हार ब्यहोर्नु पर्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हाम्रो पार्टीमा कार्यकर्ताको कमी छैन । धेरै योगदान दिने खुन पसिना बगाएका कार्यकर्ताहरु हुनुहुन्छ । तर मुल्यांकन गरेरै टिकट पार्टीले बाड्छ भन्नेमा विश्वास छ । स्थानिय निकायको चुनाव भयो त्यसमा पनि मिलाएरै टिकट वितरण भएको थियो र मान्छे हो कही कतै धेरै थोर आफ्नो प्रभावमा पार्न नेताहरुले खोज्नु हुन्छ । स्वभाविक नै हो । तर स्पष्ट म भन्छु, टिकट दिँदा पार्टी नेतृत्वले ध्यान दिएर टिकट बाड्यो भने बामपन्थी प्रतिस्पर्धामा नै आउदैनन ।
पार्टी भित्र खेमा छ भनिन्छ नी कोही रामचन्द्र खेमा, कोही शेर बहादुर खेमा, यो सत्य हो ?
राजनीतिमा यस्तो हुन्छ । फेरी ज्युदो पार्टीमा यस्तो हुन्छ तर यसले त्यस्तो धेरै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ ।
तराईमा नागरिकताको समस्या छ, सवैले नागरिकता पाउदैनन भनिन्छ नी ?
यस्तो धेरै जटिल रुपमा लिनु पर्ने समस्या हैन यो । तर के छ भने हाम्रो तराईमा हिन्दुस्थानसंग बिबाह हुने र उताबाट बिबाह भएर आएकाहरुलाई नागरिकता लिन धेरै समय कुर्नु पर्ने समस्या चाहीँ छ तर तपाईको आशय अनुसार त्यस्तो धेरै समस्या भने हैन । यसलाई बढाई चढाई गरेर विभिन्न आफुलाई मधेशी दल भन्नेहरुले उचाल्नु भएको छ ।
तराईमा बाम गठबन्धनको प्रभाब कस्तो छ ?
तराईमा अझ भनौ, सप्तरीमा वाम गठबन्धनको प्रभाव छैन । म ठोकुवा गर्छु, टिकट मिलाएर दिएको खण्डमा दुई नम्वर प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो बन्छ ।
राजपा र फोरमसंग तालमेल नगर्दा तपाइको पार्टीलाई फाईदा हुन्छ या गर्दा फाईदा हुन्छ ?
एलाईन्स नगर्दा पनि हामी जित्न सक्छौ तर एलाईन्स भयो भने झन राम्रो हो । एलाईन्स भएर चुनाबमा जाने हो भने सबै सिट हाम्रो पक्षमा आउने छ । मैले भनी सके तराईमा कांग्रेस कमजोर छैन । तर नेतृत्वले त्याग बलिदान र मिलाएर समावेशी हिसाबमा टिकट वितरण गर्नु पर्छ ।
अत्यमा म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा खुन पसिन बगाएको मान्छे हु । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका खातिर म ३६ सालदेखी सक्रिय राजनीतिमा छु र त्यो विचमा बिभिन्न आन्दोलनमा जेल–नेल थुना ब्यहोरे र नै जनताको सेवाका खात्तिर हिडेको छु । तराईका यावत समस्याका विषयमा लड्ने र हरेक समस्याहरु शिक्षा, स्वस्थ्य, सिचाई जस्ता कुराहरुलाई निराकरण गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछु ।
समय र सम्वादका लागी धन्यवाद ।
तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद छ ।
शिव नारायण चौधरीसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः